Moggaasa Hangii Hiiki
Qaaqa itti moggaasa hangii itti hiikuu dandeessu bana.
Maqaalee akka teessessuutti beekuu
Qabeentootni man'ee moggaasa hangii akka maqaawwan formuulaa- LibreOffice fayyadamuu danda'a, maqoota kunneen halaa wal fakkaatuun maqaa guyyoota torbanii fi ji'oota duraa hiikameetti fudhata.Yommuu formuulaatti barreessinu, maqootni kun ofumaan xumuramu.Dabalata,maqaan hangii moggaasan hiikame maqaalee ofumaan hangii uumamee hiikamee irra maqaalee moggaasa hangiiwwanin hiikameetu carraa dursu qaba.
Wardiiwwan garaa garaa irratti moggaassawwan wal fakkaata kan qabu moggaasa hangiiwwanii qindeessuu dandeessa.LibreOffice'n jalqaba wardii ammeef moggaasa hangiiwwanii barbaada, fi barbaacha kufaa itti aansuun,hangiiwwan wardii gara biraaf.
Tokko tokkoo moggaasa hangiif wabii man'ee agarsiisa. Sanduqa tarree keessaa moggaasa hangii haquuf,isa filun fi itti aansuunHaqiicuqaasi.
Moggaasota tarjaa of keessatti qabata
Moggaasa hangii ammee keessatti moggaasota tarjaa of keessatti qabata.
Moggaasota tarree of keessatti qabata
Moggaasa hangii ammee keessatti moggaasota tarree of keessatti qabata.
Moggaasa hangii filamee gitaa'a ta'uu isaaf hangii deetaa qindeessa Kanuma haroomsuuf, wardii keessa cuqaasuunif hangii gara biraa hantuutaan fili.
Tarreetti moggaasa hangii ammee dabali.
Title is: Moggaasa Hangii Hiiki